Relaxing Piano Music: Romantic Music, Beautiful Relaxing Music, Sleep Music, Stress Relief ★ ၁၂၂
Peder B. Helland ရေးစပ်သီကုံးထားသောစိတ်ဖိစီးမှုများကိုသက်သာစေသောပီယာနိုဂီတ ဤလှပသောအပိုင်းကို "ငါတို့ခရီး" ဟုခေါ်သည်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ https: //soothingrelaxation.lnk.to/lis ... sooth အပန်းဖြေထံမှ stream သို့မဟုတ် download, ဂီတ
💿 Track သတင်းအချက်အလက်:
Composer: Peder ခ Helland
အညွှန်း: ★ 122
ယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ဤအယ်လ်ဘမ် stream: https: //soothingrelaxation.com/produc ...
ယ်ယူရန်ကဒီလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်: https: //soothingrelaxation.com/produc ...
ဒီလမ်းကြောင်းလုပ်ရန်: https: //soothingrelaxation.com/produc ...
စာရွက်ဂီတ: https: / /soothingrelaxation.com/produc ...
သင်ခန်းစာ: https: //www.youtube.com/watch? v = cfFtl ... Soothing
Relaxation ကိုလိုက်နာပါ ...
Relaxation: https: //soothingrelaxation.lnk.to/web ...
Spotify : https: //soothingrelaxation.lnk.to/lis ...
Amazon ဂီတ: https: //soothingrelaxation.lnk.to/lis ...
Peder B. Helland ကိုလိုက်နာပါ ...
Website: https: //pederbhelland.lnk .to/websiteYL
ပိုစိတ်အေးလက်အေးသီချင်းနားထောင်ပါ https://www.youtube.com/playlist?list .။
https: //soothingrelaxation.lnk.to/new ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာနှင့်အတူ updated အခမဲ့ music download, နှင့်နေထိုင် Get
"ငါသည်နော်ဝေနဲ့ကျွန်မနေတဲ့တေးရေးဆရာနှင့်အတူဤချန်နယ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကို ရိုးရှင်းသောအမြင်အာရုံ၊ သင်ထိုင်လိုသည့်အခါတိုင်းသွားလည်။ အပန်းဖြေလိုသောနေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်တံဆိပ်တပ်နိုင်သောဂီတကိုငါရေးဖွဲ့သည် စိတ်အပန်းဖြေဂီတ။ ဂီတကိုရေးဖွဲ့ရတာကြိုက်တယ်။
နားစွင့ ်၍ တုံ့ပြန်မှုများပေးသည့်အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ နေ့တိုင်းမင်းရဲ့နွေးထွေးတဲ့အားပေးမှုတွေကြောင့်ငါလုံးလုံးအံ့ and သွားပြီးငါ့ဂီတကိုပိုကြိုးစားဖို့တကယ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ မင်းငါ့အလုပ်ကိုကြိုက်ရင်မင်းစာရင်းသွင်းပြီးငါတို့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ၀ င်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်ငါအရမ်းပျော်လိမ့်မယ်။ ! "တဲ့အံ့သြဖွယ်တစ်ရက်သို့မဟုတ်ညဦးယံအချိန်ရှိ
Peder ခ Helland, sooth အပန်းဖြေဘို့တေးရေးဆရာ -
ဂီတ Peder ခ Helland နေဖြင့်စီစဉ်ပေး / ရေးစပ်။
ထံမှလိုင်စင်ရဗီဒီယိုဖိုင် / ဓါတ်ပုံ:
• Shutterstock: အမျိုးမျိုးသောအနုပညာရှင်တွေ
☀️သက်ဆိုင်ရာ hashtags ကို:
#relaxingmusic, # အနားယူပါ၊ #သက်တောင့်သက်သာအပန်းဖြေခြင်း၊ တေးဂီတ၊ #အိပ်ခြင်း
ဂီတကို ၁၀ နာရီအပန်းဖြေ•အိပ်ပျော်ခြင်းတေးဂီတ၊ နူးညံ့သောစန္ဒယားဂီတ
ဂီတကို ၁၀ နာရီအပန်းဖြေပါ
Positive Mood JAZZ - Sunny Jazz Cafe နှင့် Bossa Nova Music
လှပသောစန္ဒယားတေးဂီတ ၂၄/၇ •အနားယူပါ၊ လေ့လာပါ၊ အိပ်ပါ
Relaxing Sleep Music ၂၄/၇ • @Peder B. Helland ၏တေးဂီတ
Stress Relief အတွက်နူးညံ့သော Piano & Guitar ဂီတ
စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေသောအိပ်စက်ခြင်းဂီတ ၈ နာရီ•လှပသောစန္ဒယားသီချင်း၊ Vol ။ ၃
လှပသောအပန်းဖြေတေးဂီတ - စန္ဒယား၊ Cello၊ ဂစ်တာနှင့်တယော | "ဆောင်း ဦး အရောင်များ"
လှပသောစန္ဒယားတေးဂီတ ၈ နာရီ
Relaxing Piano Music - Romantic Music, Beautiful Music, Soothing Sleep Music, Relaxing Music ★ ၈၉
၈ နာရီကြာအပန်းဖြေအနားယူသီချင်း•အိပ်ပျော်နေသောဂီတ၊ အပန်းဖြေတေးဂီတ၊ မြန်မြန်အိပ်ပျော်စေခြင်း
ငြိမ်းချမ်းသောစန္ဒယားနှင့်ဂစ်တာဂီတ ၁၀ နာရီ - အိပ်စက်ခြင်း၊ အေးချမ်းခြင်း၊ အပန်းဖြေခြင်း၊ ယောဂ၊ BGM
ငါနေမယ်• Sleeping & Study အတွက် feat for Piano Music ကို Relaxing လုပ်ပါ။ နော်ဝေး | သာယာသောကမ္ဘာ